Ikhaya Kungani Izindaba Zobuntwana
Senza izindaba zezingane ebholeni lezinyawo ukugcina abalandeli benolwazi ngezindaba ezikhulunywa ngabadlali ababathandayo. LifeBogger ithumba izindaba ezihlaba umxhwele kakhulu, ezimangazayo nezihehayo ngezinkanyezi zebhola ngokubheka kwezikhathi zobuntwana bazo kuze kube manje. Ukuthi siyikho!
Wonke umuntu emhlabeni oyiplanethi unendaba yobuntwana futhi nabadlali bebhola abaveli emaplanethi akude. Futhi aziguquki ngama-superpowers namakhono wemilingo. Empeleni bangabantu abangakwazi ukulandelela imvelaphi yabo kokhokho basemhlabeni.
Ngakho-ke, njengabo bonke abantu, abadlali, abaphathi, kanye nabantu abakhethekile bezemidlalo banezindaba zobuntwana ezinemininingwane ethokozisayo nethokozisayo yemicimbi kusuka eminyakeni yabo yobudala kuze kube ebusheni kuya emaphethelweni wokuba mdala.
Imininingwane ye-Lifebogger izehlakalo eziphawuleka zobuntwaneni zabadlali bebhola, abaphathi nabaphathi. Kusuka ku-LR: UVan Dijk, Luka Modric, UKylian Mbappe, Zinedine Zidane futhi Aleksander Ceferin. Ama-Credits Wezithombe: LB.
At I-Lifebogger, sidweba izindaba ezinjalo zokuphila kwangaphambi kwesikhathi okuyizinto ezibalulekile zemibhalo emnandi esethula ngabadlali bebhola, abaphathi kanye nabantu abaphakeme emhlabeni jikelele.
Isizathu sokusukela le misebenzi emihle kangaka ukufaka isandla kwisabelo sethu ekwenzeni ngcono umdlalo webhola, sikhumbula ukuthi izinhlungu ezisebusheni, izinzuzo kanye nokuhlangana kwabadlali bebhola, abaphathi nabadlali abaphezulu ngeke nje kunikeze ezinye zezifundo ezibaluleke kakhulu Impilo kodwa ube nentshisekelo kulabo abaqala nje uhambo lwabo.
Ama-biografikhi noma izindaba zeqiniso zebhola zibalulekile kubathandi bebhola abasha phakathi kwezinye izinto. Isikweletu Sezithombe: I-GhHeadlines.
Kafushane nje, le ndatshana ihlose ukunika izethameli zethu umbono ophelele wokuthi siyini ngokwethula izehlakalo zokuphila kwabadlali bebhola lezinyawo, abaphathi nabantu abakhethekile ngaphansi kwezihloko ezithokozisayo eziklanywe kahle, ezibhalwe ngokusobala nangokuphefumulayo.
Kungani Izindaba Zobuntwana - Abadlali bebhola ne-Elite Abazalwa Bampofu
Abanye ubuhlakani bebhola kanye nabantu abakhethekile bazalwa bampofu, abanye abazuzanga ngalutho, kanti abanye basebenzela ukuzikhulula ekulweni nobuphofu. Noma ngabe yikuphi okwenzekwayo yile micimbi, ubuphofu empeleni baba yinto egqugquzelayo eholele ekutheni isondo elidumile ezindabeni zezingcebo ebholeni.
Igama lencwadi le-7 elingafinyeleleki nelisabekayo likhomba ngokuphila nokukhula Cristiano Ronaldo, ikhiphe okungcono kakhulu ngaphakathi Luis Suarez, futhi ayizange iwabeke phezulu ama-elite; I-Roman Abramovich futhi Gianni Infantino kodwa yenziwe UGabriel uJesu ' khuphuka udumo olukhuthaza izigidi zezingane ezingenasici eBrazil.
Behlushwa kodwa bemomotheka, uCristiano Ronaldo, uLuis Suarez, uGianni Infantino noGabriel Jesus babhekane nezimpilo zabo zisencane. Ama-Credits Wezithombe: LB.
Ubumpofu buye baba yisisusa esinamandla yize bebuhlungu ngalaba badlali bebhola. Ngokujabulisayo, umdlalo weBhola waba yinqola yabo yokuthuthukisa izimo zabo zezimali.
Kungani Izindaba Zobuntwana - Abadlali bebhola ne-Elite Abazalwa Bacebile
Ngasohlangothini lwe-flip, inqwaba yabadlali bebhola abanekhono nabaqokiwe bazalwa bekhulu, abanye benamacici esiliva kanti abanye babenamadayimane. Ngenxa yalokhu, baba nesiqalo esihle empilweni futhi baphila kakhulu kunamamaki wobuphofu.
Ukuthandwa kwe Aleksander Caferin futhi Michel Platini babehlonyiswe ekuqaleni ngosizo abaludingayo ukuze baphile izimpilo ezinhle ngenkathi ibamba elinabadlali abaningi bebhola Mario Gotze, Andrea Pirlo futhi Gerard Pique kwakungeyona engabazi ingcebo ngaphambi kokuthola udumo.
UMario Gotze, uGerard Pique no-Andrea Pirlo bazalelwa emindenini ecebile. Ama-Credits Wezithombe: LB.
Kungani Izindaba Zobuntwana - Abadlali bebhola Abasinda Empini Namazinyo Njengabantwana
Indaba yobuntwana yenqwaba yabanye abadlali bebhola ayinakutshelwa ngaphandle kokudonsa abalandeli ngohambo oludonsa izinhlungu lwezimpi zombango kanye nemibhikisho ebingaqeda abadlali ngaphandle.
Ukubheka empilweni yakuqala kokuzalwa kweNigeria UVictor Moses ilandisa ngomphumela odabukisayo wesiyaluyalu eNyakatho yeNigeria, nawo awenzi kanjalo UJuan Cuadrado futhi USerge Aurier ube nezinkumbulo ezimnandi zobudlova edolobheni laseColombia iNecocli ne-Ivory Coast ngokulandelana.
UJuan Cuadrado ungomunye wabadlali abambalwa bebhola abasinde ezimpini nezidlakela ngesikhathi sobuntwana. Isikweletu Sezithombe: LB.
Kungani Izindaba Zobuntwana - Abadlali bebhola ebelizokufa kudala njengomntwana
Kudala ngaphambi kokuba azi ngomdlalo webhola, u-Diego Costa waba nokuhlangenwe nakho okubi okwacishe kwenza impilo yakhe yahamba.
Kwenzeka isigameko esibuhlungu ngaleso sikhathi iCosta yayinezinyanga eziyisithupha kuphela ubudala. Ushiywe ngumama wakhe owahamba wayogeza izitsha. URosta omncane walala umatilasi egumbini lakhe lokulala engazi ukuthi kunenyoka enobuthi ngemuva kwakhe. Lapho umama wakhe ebuya ekhishini embhedeni kaCosta, wabona inyoka enobuthi isondela enganeni yakhe.
UJosileide da Silva Costa wayecabanga ukuthi kwakuyicephu leteyiphu, kepha le nto abeyithatha njengetheyipu yayiya enganeni yakhe. Ngokunyakaza okusheshayo, washesha wabamba isandla sikaCosta ukuze amgweme ukulunywa yilenyoka enobuthi esindisa impilo yakhe.
Kungani Izindaba Zobuntwana - Abadlali bebhola Abakibo Obaba Babengabalinganiswa BaseMidlalo
Akunakuphikwa ukuthi ukuqeqeshwa kusize abadlali abafisa ibhola ukuthi babone ithemba ngaphakathi ngokwabo ikakhulukazi lapho abafundisi bengekho abanye abantu kepha obaba bemvelo babafana.
Ngaphandle kokuqhubeka nokudla okufana nobaba, sifana nendodana Thiago Alcantara owalandela ubaba wakhe uMazinho. Abanye bafaka USawule Niguez owanyathela izindlela zikayise u-Antonio Sergio Busquets owalingiswa ngemuva kukababa wakhe uCarlos. Ngabe ikhona enye indlela yamagugu engacebile?
UTiago Alcantara, uSaul Niguez noSergio Busquets bangamadodana ezinkulumweni zebhola. Ama-Credits Wezithombe: LB.
Kungani Izindaba Zobuntwana - Abadlali Bebhola Abashiya Isikole
Izazi zobuchopho ezimbalwa zebhola lezinyawo azikaze zibe nesineke sokusebenzisana ukuze zihlale phansi zibambe imiyalo kothisha, kanti ezinye azange ziphothule esikoleni esiphakeme njengoba imisebenzi yazo yebhola inyukile ngesikhathi seminyaka ephakathi kweminyaka yobudala.
Abadlali bebhola bahlanganisa izinganekwane ezifana Pele, kanye nomdlali webhola lezinyawo waseBrazil kanye nenxusa leBarazil - URonaldinho. Ukudlulela phansi kubadlali abaphakathi kohlaka lweminyaka eyinkulungwane - ngesikhathi sokubhala - sinokuthandwa Cristiano Ronaldo nenkanyezi ye-Barcelona - Lionel Messi ongazange aqede imfundo ejwayelekile.
URonaldinho, uMessi noPele babenesizinda semfundo esingazinzile ngesikhathi besakhula. Ama-Credits Wezithombe: LB.
Kungani Izindaba Zobuntwana - Abadlali bebhola Abacishe Bayeka Ukudlala
Kuthiwa lapho kuhamba kuba nzima, ezinzima zihamba. Ukuqina kuye kwaqinisekiswa ngokuhamba kweminyaka kuyo yonke imikhakha yemizamo yabantu yokuvimbela ibhola. Empeleni, kusizile ukuthi umhlaba ungaphuthelwa ekutholeni abadlali bebhola abangochwepheshe abebengayeka kudala ngesikhathi somsebenzi wabo.
Akunabaningi abakwazi lokho Wayne Rooney's uthando ngebhola lwaqhekeka njengephedi lamakhadi lapho esengumntwana oneminyaka engu-14. Ngokufanayo, bekungeke kube okujabulisayo U-Ibrahimovich emhlabeni webhola uma kungazange kukhulunywe ngaye ngokuthanda impilo emiqhudelwaneni. Ngokwakhe, Alisson Becker abazali bacishe bamkhipha ebholeni ngoba wayelokhu eqopha ukukhula kancane kokuzalwa noma lapho eseminyakeni ye-15.
UWayne Rooney osemncane no-Ibrahimovich bacishe bayeka ukudlala ibhola. Ama-Credits Wezithombe: LB.
Kungani Izindaba Zobuntwana - Abadlali bebhola abaqale njengabadlali be-Outfield
I-Dynamics yigama elingatholakali emibhalweni yeFiziksi kuphela, likhona ebholeni elinikezwe ukuthi ezemidlalo nayo imayelana neFiziksi. Konke kuqala ngesinyathelo sokuqala esibalulekile abathathi bebhola abasithatha besebancane ukukhahlela ibhola ukuze kujabule ngalo. Ngemuva kwalokho, bayazibandakanya nebhola lomgwaqo noma baqhubeke nokuziqeqesha namaqembu endawo kanye nezifundo zamakilabhu.
Ngenkathi ama-prodigies ebhola eselikhona, azanywa ngezikhundla ezihlukene kuze kube yilapho indawo yawo enamandla noma i-forte isunguliwe. Ngakho-ke, akumangalisi ukuthi abanye basuka ezikhundleni zokuzivikela ukuze baphokophele ukuhweba abo phezulu njengabagadli ngenkathi abambalwa ababalulekile bethanda Thibaut Courtois wehle kakhulu emuva ekubeni ngumvikeli waba igoli eligcwele. Ngokufanayo, UDavid Gea wayengumdlali ongaphandle kwenkundla aze azizwe esekhaya ngaphakathi kobukhulu bepali yegoli.
UDavid Gea noT Thibaut Courtois baqale baqeqeshwa njengabadlali abangaphandle ngaphambi kokuba babe ngamagoli. Ama-Credits Wezithombe: LB.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Nei zethu Zobuntwana. At LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.